Kutholakale izidumbu ezimbili zamaphoyisa | News24
Kutholakale izidumbu ezimbili zamaphoyisa
Thaba Nchu – Kutholakale izidumbu ezimbili zamaphoyisa eThaba Nchu, eFree State, ngoLwesihlanu, kusho amaphoyisa.
UVuyo Mhaga, okhulumela uNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula ngoMgqibelo uthe iphoyisa elingukaputeni belisemsebenzini esiteshini samaphoyisa eSelosesha ngesikhathi lithola umbiko ngesehlakalo sokudubula esenzeke e-Unit Extention, khona eThaba-Nchu.
UMhaga uqhuba ngokuthi leli phoyisa libe selibabela kulesi sigameko lafike lazithela phezu kwezidumbu ezimbili zamaphoyisa.
OLUNYE UDABA: Kutholwe izidumbu ezintathu zidindilize phambi komnyango
Womabili amaphoyisa abenamanxeba okudutshulwa emakhanda.
UMhaga uqhube ngokuthi la maphoyisa abehlala womabili futhi enezingane.
"Kukholakala ukuthi iphoyisa lesilisa lingqokloze ngenhlamvu elesifazane ngaphambi kokubhekisa umbhobho wesibhamu ngakulona,” esho.
UNgqongqoshe uMbalula ube esedlulisa amazwi enduduzo emindenini ethintekayo.
"Ngithanda ukukhalisana kakhulu nemindeni kanye nabathandiweyo babafi. Kubuhlungu ukulahlekelwa wumuntu omthandayo,” kusho uMbalula.